ဧရာ Input Method နဲ့ စာဘယ်လိုေရးမလဲ? - Club Q&A /g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); });
ဧရာ Input Method နဲ့ စာဘယ်လိုေရးမလဲ?
ဧရာနဲ့​ ​စာ​ဘယ်​လို​ရိုက်​မ​လဲ​ ​သိ​ချင်​တယ်​။
ယရစ်မှလွဲ၍ ကျန်စာလံုးများအား ြမန်မာ သင်ပုန်းြကီး စံနစ်အတိုင်း ရုိက်ပါက စာလံုးများ ေသသပ်စွာ ေပါ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ၊ ေမာင် အား သေဝထိုး မ ေရးချ င အသတ် ြဖစ်ေစ၊ ကျွန်ေတာ်အား က ယပင့် ဝဆွဲ န အသတ် သေဝထိုး တ ေရးချ ေရှ့ထိုး ဟု အစီအစဥ်အတိုင်း ရိုက်ရန်ြဖစ်ပါသည်။
ယရစ်သည် ချွင်းချက်ြဖစ်သြဖင့် ြမို့အား ယရစ် မ လံုးြကီးတင် တေချာင်းငင် ေအာက်ကြမင့်ဟု ရိုက်ရန်ြဖစ်ြပီး ြမှံုးကိုမူ ယရစ် မ ဟထိုး ေသးေသးတင် တေချာင်းငင် ဝစ္စေပါက်ဟု ရိုက်ရန် ြဖစ်ပါသည်။
ဧရာ၏ ယရစ် ေရးထံုးစံနစ်သည် ြမန်မာ သင်ပုန်းြကီး စံနစ်နှင့် ကွဲလွဲမှု ရှိေသာ်ြငားလည်း ဧရာသည် ြမန်မာစာ မရုိက်ဖူးသူများအား ြမန်မာစာရိုက်ရာ၌ လွယ်ကူေစရန် ရည်ရွယ်သည့်အြပင် ြမန်မာလက်နှိပ်စက်အား ယေန့အထိ အကျွမ်းတဝင် အသံုးြပုေနြကေသာ ြမန်မာ စာေပပညာရှင်များအား သံုးစွဲနိုင်ေစရန် ရည်ရွယ် ထားသြဖင့် ၎င်းယရစ်အား ြမန်မာလက်နှိပ်စက်မူအတိုင်း ထားရှိြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
ဧရာ Input Method အား အသံုးြပုသူများအား ေရရှည်တွင် ြမန်မာစာအား ဌာန်ကရိုဏ်းကျစွာ ရိုက်မှတ်နိုင်ရန် အဓိက ရည်ရွယ်ကာ ဖန်တီးေပးထားြခင်းသာ ြဖစ်ပါသည်။
ညှွန်ြကားေရးမှူးချုပ် = ည+ ှ+ ွ+န + ်+ြ+ က +ာ+း +ေ+ ရ+ း+ မ+ ှူ +း+ ခ+ ျ +ု+ ပ+ ်
အြပုသေဘာ = အ +ြ+ ပ +ု+ သ +ေ+ ဘ + ာ
အြပီးအတိုင် = အ +ြ+ ပ +ီ+း+ အ + တ +ိ+ု+ င + ်
သိဂင်္ီ = သ +ိ+ ဂ + င်္ + ီ
သြကင်္န် = သ +ြ+ က + င်္+ န + ်
တာဝတိံသာ = တ +ာ+ ဝ + တ +ိ+ံ+ သ + ာ
ဘဏ္ဍာေရးမှူး = ဘ + ဏ+ AUX Key + ဍ+ာ+ေ+ ရ +း+ မ + ှူ + း
ဍ်ဎ = ဍ+ AUX Key+ ဎ
၂။ပါဠ်ဆင့် ရိုက်နည်း (က)
Shift Key ြဖင့် တွဲရိုက်ေသာ ပါဠ်ဆင့်များ
မန္တေလး = မ + န+ AUX Key + တ +ေ+ လ + း
စက္ကူ = စ + က+ AUX Key + က + ူ
သတ္တုတွင်း = သ + တ+ AUX Key + ု+ တ + ွ+ င + ်+ း
အိေြန္ဒ = အ + ိ+ေ+ြ+န+ AUX Key + ဒ
၃။ ပါဠ်ဆင့်ရိုက်နည်း (ခ)
AUX Key (်)ြဖင့် တွဲရိုက်ေသာ ပါဠ်ဆင့်များ
ဝတ္ထုစာအုပ် = ဝ + တ + AUX Key + ထ +ု+ စ +ာ+ အ + ု+ ပ + ်
ဍ္ဍ = ဍ + AUX Key + ဍ
ဋ္ဋ = ဋ + AUX Key + ဋ
edited May 30, 2010 by acwpadmin